Wararka Maanta: Jimco, Nov 16, 2012-Guddoomiyaha gobollka Hiiraan oo ay la Socdaan Saraakiil ka Tirsan AMISOM oo Gaaray Magaalada Baladweyne [SAWIRRO]
Wafdiga oo ka soo duulay magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu danbeeyay ay u joogeen howlo shaqo, ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ku soo dhaweeyay mas’uuliyiinta maamulka gobollka, saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jabuuti ee horay u sii joogay magaalada.
C/fitaax Xassan Afrax oo warbaahinta la hadllay ayaa sheegay maalmihii ugu danbeeyayba howlo shaqo ay ugu maqnaayeen magaalada Muqdisho oo ay fadhiyaan mas’uuliyiinta sare ee dowladda Soomaaliya, isaga oo sheegay maamulkiisa uu madaxda ka yahay wixii hadda ka danbeeya dardar galin doono inta ka harsan howlgalada ka dhan-ka ah Al-shabaab ee gobollka Hiiraan.
‘’Talaabada ugu horeysa oo aan qaadeyno waa in horay loo sii dhaqaajiyo howlgalka ka dhan-ka ah Al-shabaab ilaa gobollka oo dhan lagu soo celiyo gacanta maamulka dowladda Soomaaliya, waxaana maalmaha nagu soo foolka leh garoonka diyaaradaha Baladweyne ka dagi doona ciidamo ka tirsan midowgga Africa ee howlgalka AMISOM,’’ ayuu yiri,’’ guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha iyo wafdigii la socday ayaa intaa kadib ku wareegay magaalada iyaga oo lugeynaya, taasoo ay ku tilmaameen astaan muujineysa nabad-galyada buuxda ee ka jirta waqtigan magaalada Baladweyne.
Mudadii ay socodka ku jireen mas’uuliyiinta maamulka iyo saraakiisha AMISOM waxaa soo dhaweynayay dadweynaha xaafaddaha ay socodka ku marayeen, inkastoo aysan meel fagaaro ah kala hadal dadka.
Magaalada Baladweyne waxaa waqtigan gacanta ku haya ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka socda dowladda Jabuuti iyo kuwa Itoobiyaan ah.